About Us - Qingdao Aedis Ilaphu bile Co., Ltd
Aedis Ilaphu oku- liqulunqa othengisa iinkqubo textile komoya (ngakumbi ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba Ilaphu yobisi / bile iikawusi / sox) ukuba idrafti-free distribution umoya kuzo zonke iintlobo amagumbi kunye izicelo.
Aedis Ilaphu oku- wayengomnye abenzi yokuqala ngelaphu bile yasekwa ngo-2003 yaye ukususela ngoko iye likhule laba ngelaphu obucala umenzi likhulu China.
Aedis Ilaphu oku- ise e Qingdao, China kunye lixhotyiswe software ubalo phambili eyenza iinjineli yayo abanamava ukuba balingise yesisombululo ukunika olona xhaso yobugcisa kwishishini ngelaphu duct. Le ofisi yasekwa ngo-2003 yaye ukususela ngoko iye ngempumelelo sele ukwandisa coverage layo lonke China, yaye ukususela ku-2012, siqale kumazwe angaphandle ilaphu wethu umoya bile kulo lonke ihlabathi ngenxa Abameli ezithile HVAC Manufacturers '.
Sisebenzisa software 3d obuphuma ukuyila kwindlela yakho umoya kwiintsali. Kungakhathaliseki ukuba mbaxa yoyilo iinkqubo zethu umgangatho Ukuqinisekisa ukunikezelwa kweenkonzo ekujoliswe kunye nexesha. Nezimo Technical kwenkqubo kudityaniswe imiba yokusingqongileyo eziluncedo koqoqosho nje ezinye zezizathu zokuba inkqubo yethu umoya kwiintsali iye yaphinda yathandwa kunye nabayili bezakhiwo, abaphuhlisi kunye neekontraka ehlabathini lonke, abadla ukuguqula eqhelekileyo umbhobho metal kwiinkqubo ngelaphu. Nantoni na kungenziwa metal kunokwenziwa ngelaphu.
Umoya Ilaphu kwiintsali yi icandelo lukhawuleza lukhule. Uhlobo okulula inkqubo FabricAir ngayo yenza kube ilungele inani lezicelo incl. izakhiwo zethutyana, ezifana ezintenteni kunye namaholo mboniso, sase- izakhiwo ezikhoyo. Iimpawu anti-bako zikwenza imncede ithandwa kumabala ezemidlalo, natatoriums, amakhitshi mveliso hayi Ukupholisa kunye ebandayo izicelo ubuncinane, apho eqhelekileyo umbhobho metal amaphutha ebalulekileyo. Iipropati ucoceko kunye anti-ngeentsholongwane Olukhetho lukwenza ukuba ongamile processing ukutya, yokugcina ukutya kunye nezicelo zonyango. Yaye intuthuzelo wadala yi yemifanekiso ukuhamba amakhulu ukwenza sezulu endlwini mkhulu kwiinkqubo metal oluqhelekileyo.
Ukusebenzisa ngelaphu umbhobho ithetha ukudala inkqubo air kwiintsali na engile, naziphi na ubude kunye naziphi ngobubanzi ezinqwenelekayo. Akukho ukulinganiselwa xa kufikwa iingalo, reducers uthabathe-ukudela. Nantoni na ofuna ukuyenza xa umbhobho metal kunokwenziwa ngelaphu, kwaye ke ezinye. Njengoko ngelaphu umbhobho ayikho bako, kukho inani lezicelo apho iinkqubo umoya ngelaphu kwiintsali kunabanye eziqhelekileyo umbhobho metal. Imibhobho Ilaphu angaphantsi enengxolo, amafu free kunye ubunzima kuphela iqhezu umbhobho metal.
Imibala baqhube njani afaneleke scheme design kwaye kunokwenzeka ukushicilela iilogo nangaphezulu phezu imiphezulu. Imibhobho Unga zisiwe kunye zokwaleka umz ekhethekileyo nasekugxotheni oyile, unyango anti-ngeentsholongwane, unyango anti-ndawonye njalo njalo. Funda okungakumbi ngendlela yethu inkqubo isebenziseka.
Enye inzuzo kweenkqubo ilaphu phezu umbhobho but is inqanaba eliphezulu sentuthuzelo umnxusi kwimimandla umoya. Ukusebenzisa Ilaphu ikuvumela injineli ukwenza imodeli flow ifanelekileyo ukuze nasiphi na isithuba anikwe kungekho idrafti, akukho amafu, akukho ingxolo kunye akukho nemimandla ufile. Amava abonisa ukuba ukusebenzisa iinkqubo usasazeko FabricAir ezindaweni zomsebenzi ezibandayo na inzuzo iintsuku abagulayo ezimbalwa phakathi kwabasebenzi, kunye nohlobo anti-bako nesempilweni yenkqubo umbhobho yenza kube ongamile kwizibonelelo ezibandayo kunye neGauteng ezifana izityalo processing inyama.
Iinkqubo air kwiintsali Ilaphu zikwabizwa ngokuba iinkqubo textile umoya, imibhobho ilaphu, iikawusi bile, okanye sox, kwaye esasidume iinzuzo zabo bhetyebhetye kunye ezingundoqo ezifana idrafti-free, amafu-free, noiseless, umhlwa-free nesempilweni. Iinkqubo kwiintsali FabricAir zifikelela kwiinkalo ngeenkalo izicelo incl. ukutya, ezemidlalo, Industrial, ngemiyinge emincinci kunye neendawo zoluntu, imfundo, ii-ofisi kunye nentuthuzelo ngokubanzi, kunye noshishino zonyango. Funda okungakumbi izicelo.